महाअभियोग प्रस्ताव आउनुको कारण - Ratopati
महाअभियोग प्रस्ताव आउनुको कारण
- | विशाल महत
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस भएको छ । यो विषयले अहिले जताततै चर्चा पाएको छ । देशको राजनीति यही विषयमा केन्द्रित भएको छ । देशको कुना काप्चामा बस्ने जनताका बीचमा यो विषय मुख्य चर्चाका रुपमा रहेको छ । अख्तियार प्रमुखका रुपमा लोकमान नियुक्ति हुँदा नै उनी विवादै विवादमा थिए । यस्तो विवादबीच राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा दुईतिहाई बहुमतबाट नियुक्ति भएका अख्तियार प्रमुखमाथि नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दलहरुमध्ये एमाले र माओवादी केन्द« मिली संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुले नेपाली राजनीतिमा अहिले विभिन्न शङ्का उपशङ्का पैदा भएको छ ।
लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता, पदीय आचरणमाथि थुप्रै प्रश्न चिन्ह खडा हुँदाहुँदै मुख्य राजनीतिक दलहरु (काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी) बीचको सहमतिबाट अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए । उनले थुप्रै भष्टचारिलाई समात्न केही हदसम्म सफल पनि भएका थिए । उनले सानादेखि मझौला भष्टचारीलाई समातेर कारबाही गर्न सफल भएका थिए । तर ती कारबाहीमा समेत लोकमानले पूर्वाग्रही भाव राख्ने गरेको भन्ने हल्लासमेत चर्चामा आयो ।
पछिल्लो समय लोकमानले न्यायपालिकालाई नै अटेर गर्नुले न्यायपालिकामाथिको अपमान हुनुका साथै देशको सर्वोच्चता माथि नै प्रश्न उठ्यो । तर के यही कारणले उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो त संसदमा ? वा अरु नै कारण छ ? यो सोचनीय प्रश्न भएको छ । लोकमान नियुक्तिदेखि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस हुदासम्मका सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई हेर्दा यस पछाडि कारण अरु नै भएको पाइन्छ ।
साना माछा समातिरहेको र अब ठूला माछा समात्छु भन्दै आएका लोकमानले केही समय पहिले माओवादी लडाकु समायोजन प्रकरणमा भएका भष्टाचारको फाइल अघि बढाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए भने एमालेका केही प्रमुख नेताका फाइल अघि बढाएकाले त्यसको डरले षडयन्त्रपूर्वक महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गरिएको हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ तराईका दलहरु जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्नुपर्ने, तराईलाई एक मधेस एक प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । तर पमुख पार्टीहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा सो हुन सकिरहेको छैन । छिमेकी देश भारतले पनि तराईका दलहरुले भने बमोजिम संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिँदै आइरहेको छ । तर अहिलेको मुख्य प्रतिपक्ष दल एमालेको अडानका कारण तराईका दलले भनेजसरी संविधान संशोधन हुन सकिरहेको छैन ।
महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्न तिन दल नमिली दुईतिहाई नपुग्ने हुनाले मुख्य तीन दल एक हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा एमाले र माओवादीले पेस गरेको हुँदा काङ्ग्रेसको साथको आवश्यकता पर्दछ । काङ्ग्रेसले साथ नदिए महाअभियोगको प्रस्ताव पास हुन नसक्ने हुँदा काङ्ग्रेसले प्याकेजमा सहमति गरौँ भन्दै संविधानको संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउने र भारतले भनेअनुसार संशोधन गर्ने, त्यसो नगरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पास हुनबाट रोक्ने अर्को सम्भावना देखिएको छ । यसरी भारतको इसारामा संविधान संशोधन गरेर प्याकेजमा महाअभियोग प्रस्ताव पास गरेमा अथाव प्रस्ताव पास हुन नसकेमा राष्ट्रका लागि घातक हुनेछ ।